Kaalinta Bukaan-la-roorayaashu ay kaga jiraan gargaarka deg-degga ah. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka September 26, 2017	0 277 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Dad badan waxay aalaaba anbalaasta ku qeexaan gaadiid afar lugood leh oo loo adeegsado in lagu daabulo dhaawaca iyo kuwa xanuunsan. Xaqiiqdii, ereyga ambalaas waxaa loo qeexi karaa mid guda ballaaran. Kuma koobna oo kaliya gaari dhigaha kore ku sita codbaahiye iyo ganbaleel – dhexdana uga cabaysan qalabkii lagula tacaali lahaa dhibanaha u baahan gargaarka degdegga ah.
Previous: Gabar Jiir u karisay qoyska ay ku shaqeyso si ay kaga aarsato!
Next: Maqaal – Nidaamka Calmaaniyadda Qabiilka.
Qormo – Dal-jir Dadkiisa ka didaya miyaa Dalkiisa dhowri kara?!
Caddaan shan sano Madow addoonsanayay oo lagu xukumay xabsi 20 sano.